China JY-1028 Silicone surfactant adjuvants maka ụlọ ọrụ agro-chemicals na ndị na-emepụta | Juyou
JY-1028 Silicone surfactant adjuvants maka kemịkal agro
mee ngwa ngwa kwalite nrubeisi nke agro-kemịkalụ, mgbasa, nsị, nrube isi na osisi. Enwere ike ịbawanye ebe na-agbasa na ọsọ nke kemịkal agro na akwụkwọ osisi. Karịsịa na akwụkwọ ndị ahụ nwere elu waxy, JY-1028 nwere ike banye ma banye n'ime stomatas nke osisi ahụ wee mee ka ha mee ngwa ngwa.
JY-1028 bụ organic silicone surfactant/adjuvants maka agrochemicals.
N'ihi esemokwu ala ya dị ala, mgbe agbakwunyere ya na kemịkal agro,
1) 、 na-eme ka agro-kemịkal banye ngwa ngwa, gbasasịa, na-amịkọrọ ihe, na-amị mkpụrụ osisi. Enwere ike ịbawanye mpaghara na-agbasa na ọsọ nke kemịkal agro na akwụkwọ osisi. Karịsịa na akwụkwọ ndị ahụ nwere elu waxy, JY-1028 nwere ike banye n'ime ma banye n'ime stomatas nke osisi ahụ wee mee ka ha mee ngwa ngwa.
2) 、 Site na iji JY-1028 adjuvant, agrochemical nwere ike iguzogide ịsa mmiri, enwere ike ịgbasa agro-chemcial ọbụlagodi n'ụbọchị mmiri ozuzo.
3) 、 JY-1028 nwere ike ịbawanye mpaghara ịgba agro-kemịkalụ, yabụ nke nwere ike ịchekwa usoro agrochemical site na 20-30%, belata ego ịgba agro-kemịkalụ na n'ikpeazụ chekwaa ọnụ ahịa ma chekwaa gburugburu anyị.
4) 、 JY-1028 anaghị egbu egbu, adjuvant gburugburu ebe obibi,
Ndepụta isi ngwaahịa
Ọdịdị mmiri doro anya ma ọ bụ mmiri amba dị ọkụ
Esemokwu dị n'elu (0.1%Wt) 20.0-22.5mN/m
Nnukwu ike ndọda (25 Celsius C) 1.010-1.015g/cm3
Viscosity (25 Celsius C) 20-50mm2 /s
Ebe igwe ojii (0.1%Wt mmiri mmiri) <10 Celsius
Ọdịnaya nọ n'ọrụ 100%
1) 、 spraying ngwakọta na drum (tank ngwakọta)
Na mkpokọta, gbakwunye JY-1028 (4000times) 5g na ihe ọ bụla 20kg ịgba ọgwụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwalite mgbasa ozi nke ọgwụ na -egbu egbu, mụbaa ọrụ nke pesticide ma ọ bụ belata ego ịgba ahụ n'ihu, ọ kwesịrị ịgbakwunye ego ojiji ya nke ọma. N'ozuzu, ego ya dị ka ndị a:
Onye na-akwalite ihe ọkụkụ na-eto eto: 0.025%-0.05%
// Ọgwụ ahụhụ: 0.025%-0.15%
// Ọgwụ ahụhụ: 0.025%-0.1%
// Ọgwụ nje: 0.015%-0.05%
// Fatịlaịza na Chọpụta mmewere: 0.015%-0.1%
Mgbe ị na-eji, buru ụzọ gbasaa ọgwụ na-egbu pesticide, gbakwunye JY-1028 mgbe ngwakọta nke mmiri 80%, wee tinye mmiri na 100% wee gwakọta ya otu. A na-adụ ọdụ na mgbe ị na-eji adjuvant, mmiri mmiri belatara ruo 1/2 nke nkịtị (tụrụ aro) ma ọ bụ 2/3, nkezi ọgwụ ahụhụ na-ebelata ruo 70-80% nke nkịtị. Iji obere oghere oghere ga -eme ka ịgba ịgba ọsọ ọsọ.
2) Usoro izizi (stoste) nke ọgwụ ahụhụ
Na-agbakwunye JY-1028 na usoro izizi nke ọgwụ ahụhụ, anyị na-atụ aro na ego ahụ bụ 0,5%-8%. Gbanwee uru PH nke ndenye ọgwụ ahụhụ ka ọ bụrụ 6-8. Onye ọrụ kwesịrị ịhazigharị ego nke JY-1028 dị ka ụdị ọgwụ ahụhụ na ndenye ọgwụ si dị iji nweta nsonaazụ kacha arụ ọrụ na nke akụ na ụba. Mee nnwale ndakọrịta yana nwale nwale tupu ị were ya.
nhazi nke Agro-Chemical fipronil methidathion triazophos kresoxim-methyl carbendazol difenoconazole glyph osate dị ọcha 920
ịta (%) 2-4 1-3 0.6-2 2-6 1-3 2-6 0,5-2 1-3 2-7
mmiri ọgwụ na -efe efe na -efe efe na -efe efe dị ka pesticide, bactericide, herbicide, fatịlaịza foliar, onye na -ahụ maka uto osisi, wdg,
200kg/drum drum, 25kg/plastic plastic, 5g/pice, iji chekwaa ya na ebe dị jụụ. Iji gbochie ìhè anyanwụ kpọmkwem, ụgbọ njem ngwongwo na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: KY-1077 Silicone surfactant adjuvants maka kemịkal agro
Osote: JY-1027 Solidact surfactant silicone maka agro-kemịkal
Onye enyemaka ugbo
Ndị na -enye ọgwụ ahụhụ
Onye na -egbu ahụhụ